यस्तो छ योग र यसको महत्व, थाहा पाई राख्नुहोस्
अक्टोबर 12, 2019 अक्टोबर 12, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments योग
योग गर्नाले मानिसलाई स्वस्थ रहन धेरै मद्दत गरेको हुन्छ । योगबारे छोटो जानकारी आज मैले पाठक सामु पस्कन गइरहेको छु । योग मानिसले मात्र होइन पशुपन्छिले समेत गरेको हुन्छ । योग वा व्यायाम भन्नाले बिरामीका लागि मात्रै उपचार गर्ने विधि नभई यो एउटा प्राकृतिक स्वस्थ्य जीवनशैली प्राप्त गर्ने माध्यम पनि हो ।
सामान्य रुपमा योगलाई शारीरिक अभ्यासका रुपमा लिने गरिन्छ । तर योगभित्र धेरै नै राम्रा पक्षहरु रहेका छन् । योगले मानिसलाई शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, संवेदनात्मक र त्यस्तै धेरै रुपमा मानिसलाई स्वस्थ राख्न ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ ।
योगको महत्व किन छ ?
योग उपचार बिधि बिरामीका लागि मात्रै उपचार गर्ने विधि नभई यो एउटा प्राकृतिक स्वस्थ्य जीवनशैली हो । दैनिक योग गर्नाले हाम्रो शरीर स्वस्थ रहन मद्दत गर्दछ ।
योग कस्तो गर्दा ठिक हुन्छ ?
योग कस्तो गर्नाले हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो हुनसक्छ भन्ने प्रसंगमा योग धेरै प्रकारको छ । आफुले गर्न सक्ने जस्तोसुकै योग किन नहोस् गर्नुस्, यसले फाइदा हुन्छ । योग नगर्ने मानिस चाँडो मर्छ ।
हरेक उमेर समूहका लागि योग आवश्यक हुन्छ । आजको भागदौडको जीवनमा त शारीरिक तन्दुरुस्तीको सहज उपाय योग नै हो । योगीहरुका अनुसार, योगबाट मानसिक रोगदेखि दीर्घ रोगसम्म निको हुन सक्ने बताउछन् ।
योग र यसका प्रकारहरु
← सन् २०१९ को नोबेल शान्ति पुरस्कार इथियोपियाली प्रधानमन्त्रीलाई
स्वास्थ्यको लागि गहुँ वा जौको जमराको जुसका फाइदाहरु →
नोभेम्बर 19, 2018 नोभेम्बर 20, 2018 साइन्स इन्फोटेक 0